Shaneemo 30 sano ka hor la xiray oo Qaza xalay dib looga furay - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka GAZA CINEMA
Image caption Shaneemo 30 sano ka hor la xiray oo Qaza xalay dib looga furay
Markii u horreysay muddo 30 sano ka badan dadka ku nool magaalada Qaza ee Falastiin, waxa ay xalay galeen shaneemo ay film ku daawadeen ilaa dhowr boqol oo qof oo rag iyo dumar isugu jira.
Hal habeen oo keliya, Shaneemada al-Saamir ee magaalada Qaza waxay dhigtay film gaar ah oo laga sameeyay xaaladda Falastiiniyiinta ku jira xabsiyada Israa'iil, kaas oo ku hadlaya afafka Carabiga iyo Hebrow-ga ee Yuhuudda.
Waxaa daawashada film-kaas ka qayb galay 350 qof iyadoo ragga iyo haweenka aan la kala soocin oo ay meel qura ku wada daawanayeen.
Shaneemada al-saamir oo la dhisay sanadkii 1944-kii, waxaa la xiray 1960-yadii, film-adii laga daawan jiray marinka Qaza-na waxaa la joojiyay sanadkii 1987-dii markii uu bilawday kacdoonkii ugu horreeyayee Falastiiniyiinta.
Qaar badan oo ka mid ah dadkii shalay daawaday film-ka waxay sheegeen inay haatan doonayaan shaneemo film-ada si joogta ah looga daawado ee marinka Qaza oo ku hoos jirtay xayiraad Israa'iil ay ku haysay muddo toban sano ah.
Marinka Qaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qof ayaa waxaa maamula Ururka Xamaas.